3 ngwa ọdịnala iji zere ihe ndọpụ uche na ọrụ | Esi m mac
3 free ngwa ngwa iji zere ndọpụ uche na-arụ ọrụ
Egburu | | Ngwa ndị ọzọ maka Mac, ọtụtụ
Ọ na-eme anyị niile oge niile. Anyị na-anọdụ ala n’ihu kọmpụta dị njikere ịmalite ịrụ ọrụ mana mana tupu anyị amara ya, anyị hụrụ onwe anyị na-enyocha email, na-ele foto ụfọdụ na Facebook, na-agụ isiokwu na-adọrọ mmasị nke emeela ka anyị mara, wdg. Na nkenke, na-emikpu n'ime ihe ndị na-enweghị ihe jikọrọ ha na ihe anyị na-achọ ime. Luckily, e nwere mmepe onye ghọtara nke a ma gbalịsie ike ịchọta ngwọta ga-enyere anyị aka zere ihe ndọpụ uche n'ọrụ anyị. Taa, anyị na-egosi gị ngwa anọ anọ ga - enyere anyị aka izere ịdọpụ uche na ntanetị. Nye ha ohere n'ihi na ọ nweghị ihe ga-efufu, ha nwere onwe ha, mana enwere otutu oge iji nweta.
1 Ngwa iji zere ihe ndọpụ uche
Ngwa iji zere ihe ndọpụ uche
Nanị bụ ngwa na-enyere anyị aka inyocha oge anyị na-etinye n'ịntanetị yana otu anyị si eji oge ahụ. Suprima Venkatesano, onye nchịkọta akụkọ nke iPhone Life, kwuru na ọ na-eji ya kemgbe ọtụtụ afọ ma na-azọrọ na ọ gbanwere omume ya n'ezie wee zere ọtụtụ ndọpụ uche. Naanị wụnye ya na kwa izu na-ewepụta akụkọ zuru ezu banyere ugboro ole ojiji nke weebụsaịtị na ngwa dị iche iche. Site n’inwe akụkọ zuru ezu kwa izu, nke a nwere ike ịmepụta obi amamikpe, nke nwere ike bụrụ nnukwu mkpali.
Ngwa weebụ a sitere na ụda ndabere iji bulie ihe okike na arụmọrụ yana zere ihe ndọpụ uche. Nnyocha egosiwo na ige ntị na ụda olu nwere ike ịbawanye ọtụtụ na ule dabere na okike. Nke kacha mma Noisli? Nwere ike ijikọ ma dakọtara site na ọtụtụ nhọrọ ụda ma mepụta listi ọkpụkpọ. Noisli o nwekwara ngụ oge nke ga - abụ nnukwu mmụba na nrụpụta ọrụ gị.
Freedom bụ ngwa na-enyere gị aka igbochi weebụsaịtị na ngwa wee belata ndọpụ uche. Nwere ike iwunye ya na gị iPhone na iPad ịbụ ezigbo mgbe ngwaọrụ ndị a aghọwo isi iyi nke ndọpụ uche.
You na-eji ngwa ma ọ bụ aghụghọ ọ bụla ọzọ iji lekwasị anya ma zere ihe ndọpụ uche? Hapuru anyi echiche gi n’ime ihe ndia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Ngwa ndị ọzọ maka Mac » 3 free ngwa ngwa iji zere ndọpụ uche na-arụ ọrụ
Ihe ọzọ na - arụ ọrụ bụ na - ege egwu oge gboo. Ọ na-eje ozi iji mee ka obi ruo gị ala ma si otú a na-arụpụta ihe.
Zaghachi Marco Tohom
Mee ngwa ngwa faịlụ n'etiti desktọọpụ na OS X na Yoink
Apple na-agbakwunye obodo ọhụrụ 23 na Flyover na ngwa Maps